विश्वकर्मा पूजा किन ? शास्त्रमा के छ ? « On Khabar
विश्वकर्मा पूजा किन ? शास्त्रमा के छ ?
आज विश्वकर्मा पूजा। देशभरका उद्योग कलकारखानाका मेसिन तथा फलामको पूजा गरेर मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष असोज १ गतेका दिन विश्वकर्मा पूजा गरिन्छ। यो वर्ष १७ सप्टेम्बरमा विश्वकर्मा पूजा परेको छ। हिन्दु संस्कृतिमा उनलाई यन्त्रको देवता मानिन्छ ।विश्वकर्मा बाबा देवताका शिल्पीकार, वास्तुकार, प्रथम इन्जिनियर र मेशिनका देवताको रुपमा चिनिन्छन्।
आधुनिक युगमा पनि मानव सभ्यताको विकासको लागि विश्वकर्माको महत्वपूर्ण स्थान भएकोले गर्दा विश्वकर्माको पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाको महत्व के हो ? विश्वकर्मा पूजा घरमा भन्दा अफिस, कलकारखानामा विशेष रुपले गरिन्छ। निर्माण, इन्जिनियरको कामसँग सम्बन्धित ठाँउमा उत्साहका साथ यो पर्व मनाइन्छ।
कारखानामा विश्वकर्मा पूजाका दिन सुख संमृद्धिको कामनासहित गाडी, मेशिन, औजार, हातहतियारका सफाइ गरेर फूल, अविर, केशरी, धुपबत्ती, मिठाइ चढाएर पूजा गरिन्छ। यस दिन विश्वकर्मा बाबाको सम्मान स्वरुप औजार मेशिनहरुलाई विश्राम पनि गराइन्छ।
यसरी पूजा गर्नाले व्यापारमा वृद्धि साथै धनधान्य हुने मान्यता छ। यो दिन घरमा पनि गाडी, कम्प्युटर, ल्यापटप, विभिन्न घरेलु औजार, हतियारको पूजा गरिन्छ। त्यस्तै विश्वकर्मा मन्दिरमा विशेष पूजा आरती हुन्छ।
उनको जन्म दिनलाई नेपाल मात्र नभएर भारत र अन्य हिन्दु धर्म मान्ने देशहरुमा विश्वकर्मा जयन्ती अथवा विश्वकर्मा पूजाको नामले पनि चिनिन्छ । देव शिल्पी विश्वकर्माले नै देवताहरुका लागि महल, अस्त्रशस्त्र, आभूषण आदि बनाउने काम गर्थे । त्यसैले उनी देवताका पनि आदरणीय थिए ।
इन्द्रको सर्बाधिक शक्तिशाली अस्त्र बज्रको निर्माण विश्वकर्माले नै गरेका थिए। सास्त्रका अनुसार भगवान विश्वकर्माले सृष्टिको रचना गर्न ब्रम्हालाई सहयोग गरे र संसारको रुपरेखाको नक्सा तयार गरेका थिए ।
रामायणमा वर्णन गरिए अनुसारको रावणको सुनको लंका विश्वकर्माले नै बनाएका थिए। भगवान शिवले पार्वतीसँग विवाह गरेपछि विश्वकर्माबाट सुनको लंका निर्माण गर्न लगाए।
शिवले रावणलाई गृह पूजनका लागि बोलाए। पूजा पश्चात रावणले भगवान शिवसँग दक्षिणाको रुपमा सुनको लंका मागे। त्यसैले शिवले सो लंका रावणलाई दिएका थिए । सीताको खोजीमा लंका जादा हनुमानले उक्त सुनको लंका जलाइदिएका थिए। त्यसपछि फेरि रावणले विश्वकर्मालाई बोलाएर सुनको लंकाको पुनर्निर्माण गराएका थिए।
देव शिल्पी भएकाले भगवान विश्वकर्मा मेसिनरी तथा शिल्प उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुका लागि प्रमुख देवता मानिन्छन्। वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि ब्यक्तिले विहानदेखि साँझसम्म कम्प्युटर, मोटरसाइकल, कार, पानी तान्ने मोटर,मिल अन्य बिजुलीका उपकरण आदि मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्छन्। भगवान विश्वकर्मा यी सबै ब्यक्तिहरुका लागि देवता हुन्।
यसै कारण वर्तमान युगमा विश्वकर्माको महत्व पनि दैनिक रुपमा बढिरहेको छ। पहिले शिल्पकारहरुले मात्र उनको पूजा गर्ने गरेकोमा हाल घर घरमा उनको पूजा हुन थालेको छ।
विश्वकर्माको पूजा गर्ने हो भने मेसिनरी सामानले लामो समयसम्म आफूलाई साथ दिन्छ र आफूलाई धोका दिदैन भन्ने मान्यता छ। आफूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि मेसिनरी सामग्रीलाई राम्रोसँग सफाइ गरेमा नै विश्वकर्मालाई खुसी तुल्याएको ठहर्छ।
यसको सरसफाइका लागि जे कुरामा कमी भएको छ, त्यसलाई हटाएर आगामी दिनमा यसैमा पूरा ध्यान दिनेछु भनी कबुल गर्न सकिन्छ। विश्वकर्माको तस्बिरमा फूल र माला लगाइदिएर मात्र विश्वकर्मालाई खुसी तुल्याउन सकिदैन।
भगवान विश्वकर्माको जयन्ती वर्षाको अन्त्य र शरद ऋतु प्रारम्भ हुने बेलामा मनाउने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यो दिन सुर्य कन्या राशीमा प्रवेश गर्छन्।
सूर्यको गति अंग्रेजी तारिखसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले कन्या संक्रान्ति पनि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर १७ मा पर्छ। प्रायः यही दिन पर्ने भएकाले विश्वकर्मा जयन्ती पनि सेप्टेम्बर १७ मा मनाइन्छ।विश्वकर्मा पूजाको दिन खासगरी औद्योगिक क्षेत्र, कारखाना, फलामका पसल, सवारी साधन सोरुम, सर्भिस सेन्टर, वर्कसप आदिमा पूजा गरिन्छ ।
यस दिन मेसिन सफा गरेर रंगरोगन गरी पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन मेसिनमा काम गर्न नहुने मान्यता भएकाले यस्ता कलकारखाना बन्द हुन्छन्।नेपालमा पनि विश्वकर्मा पूजा गर्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ।
कुनै पनि मेसिनरी कार्य गर्नेहरुले उनको पूजा गर्छन्। सवारी साधनसँग सम्बन्धित वर्कसप, सोरुमहरुले पनि उनको पूजा गर्न थालेका छन्।